प्रहरीद्वारा वडाध्यक्षलाई दुर्व्यवहार, घटनाको विरोधमा वडा कार्यालय बन्द – इन्सेक
प्रहरीद्वारा वडाध्यक्षलाई दुर्व्यवहार, घटनाको विरोधमा वडा कार्यालय बन्द
दाङ ०७८ जेठ १९ गते
घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष ४९ वर्षीय रमेशकुमार पाण्डेयमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा कार्यरत २९ वर्षीय इन्स्पेक्टर रामकुमार गुप्ताले जेठ १८ गते दुर्व्यवहार गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा वडा नं. १५ र ५ को कार्यालय बन्द गरिएको छ ।
कोभिड सङ्क्रमितका लागि अक्सिजन सिलिण्डर सङ्कलन गर्न हिँडेका वडाध्यक्ष पाण्डेयलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको गेटमा जेठ १८ गते चेकिङको क्रममा इन्स्पेक्टर यादवले दुर्व्यवहार गरेको र परिचयपत्र देखाउँदा देखाउँदै वडाध्यक्ष चढेको रा ४ प ५०१३ नम्बरको स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको पीडितको आरोप छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी गणेश चन्दले निषेध आदेशको बेला पास बिना निजी सवारी साधनमा हिँडेकाले प्रहरीले स्कुटर नियन्त्रणमा लिइएको तर पछि लिन बोलाउँदा पनि उहाँ नआएको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यस्थलमा रहेका प्रहरीले वडाध्यक्षलाई नचिनेकाले घटना भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष पाण्डेयले निर्वाचित भएदेखि नै सरकारी साधन नचढ्ने घोषणा गरेर आफ्नै स्कुटरमा चढ्ने गरेको बतउनु भयो ।
घटनाको विरोधमा वडा नं. १५ र ५ को कार्यालय एक दिनका लागि बन्द गरिएको वडा नं. ५ का अध्यक्ष विष्णुमणी दाहालले बताउनुभयो ।
कार्यालय बन्द हुदा अत्यावश्यकीय सेवा अबरुद्ध भएका छन् । घटनाको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेस दाङका सचिव शङ्कर डाँगीले जेठ १८ गते विज्ञप्ति निकालेर दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्नु भएको छ ।
घोराही उपमनपाकी उपप्रमुख सिता सिग्देल न्यौपानेले ‘मिस अण्डरस्ट्यान्डिङ’का कारण घटना भएको र त्यसको समाधान आपसी छलफलबाट गरिने बताउनुभयो ।